Taliyihii ciidamada Gorgor oo lagu dilay agagaarka Villa Somalia | Xaysimo
Home War Taliyihii ciidamada Gorgor oo lagu dilay agagaarka Villa Somalia
Taliyihii ciidamada Gorgor oo lagu dilay agagaarka Villa Somalia
Taliyaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxaadeey Saleebaan Eebakar iyo askariga ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa dilkoodu yimid, kadib markii ay rasaaas ku fureen ciidanka ilaalada Hotelka Maa’ida Ex Naasa-hablood laba ee degmada Xamar wayne gaari uu watay sarkaalka.
Goobta uu falkaas ka dhacay ayaa maalmo ka hor la dhigay Bar koontorool oo laga ilaaliyo Hotelka, waana wadada ka baxda madaxtooyada ee aada dhanka Isgoyska Jubba.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in sarkaalka inta aan rasaasta lagu furin uu codsaday in laga qaado birta si uu u gudbo, balse waxaa ka diiday ilaalada Hotelka.
Intaas kadib ayuu dib u qaaday gaarigiisa wuuna ka soo dagay si uu mar kale uga codsado ilaalada Hotelka in laga gudbiyo birta, balse waxaa mar qura rasaas huwiyay askartii ku sugneed barta koontorool ee laga ilaaliyo Hotel Maa’ida.
Askariga ayaa isaga oo meyd ah goobta laga qaaday, waxaana dhaawac uu isbitaalka ugu geeriyooday goobta looga qaaday Maxaadey Saleebaan oo ahaa tiliyihii urur ka tirsan ciidamada uu taba baray Turkiga oo lagu magacaabo Gorgor.